Adolescente esce dal coma: “Ho incontrato Gesù, ha un messaggio per tutti” | Ilblogdellapreghiera
Nwa na-eto eto si na nsogbu: "M zutere Jizọs, o nwere ozi maka onye ọ bụla"
Paolo Tescione	Edere ya June 7, 2020 June 7, 2020
Otu nwa agbogho bilitere site na nchi-nwanyi ma kwue banyere nzute Jisos, onye gwara ya ka o zie onye obula ozi.
Akaebe nke Kyla bụ naanị ihe kachasị ọhụrụ na usoro dị ogologo. Ọtụtụ mgbe, ndị na-alụ ọgụ na-akọ na ha hụrụ paradise.
Ihe ọghọm ụgbọ ala
N’afọ 2016 Kyla Roberts dị naanị afọ 14 ma ọ nọ n’ụgbọala nke otu enyi nke 17. Nwa nwoke ahụ tụfuru nchịkwa nke ụgbọ ahụ na iji nwetaghachi nchịkwa ya na ngwongwo ọ kwụsịrị ụgbọ ala ya ọtụtụ oge. . Ihe mberede ahụ mere n'otu obodo Oklahoma (United States) na ọnụ ọgụgụ ndị ahụ dị njọ. Onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ, enyi ya nọ ọdụ n'akụkụ onye njem, a kpọgara nwa agbọghọ n'ụlọ ọgwụ Harmon Memorial, ebe a na-anabata ha n'ụlọ ọgwụ n'ihi ọkpọ ahụ merụrụ ahụ na mmerụ ahụ, mana ọ nweghị onye n'ime ha na-eyi ndụ egwu.
Ọnọdụ ụmụ nwanyị abụọ ndị a dị njọ karịa, a kpọgara ha n'ụlọ ọgwụ na Oklahoma City. Kyla, onye tara ahụhụ site na nkwarụ obi na nkwanye ọbara n'ime ụbụrụ, nwere ihe kachasị njọ. Rue ubochi nile ka etinyekwara nwa ahu n'ime ogwu ya, ndi dibia a kowara ndi nne na nna na enwere obere olile anya na a ga-azoputa ya.
Ndị na-eto eto na-eteta ụra na coma ma na-ezisa ozi Jizọs
Luckily Kyla mechara teta ma nwetaghachi ikike ya niile. Ngwa ngwa o tetara, nwa agbọghọ ahụ gwara nne ya na ọ hụla igwe, ma ya agwa Jizọs okwu. N’oge ọ na-achọ ọnwụ, onye dị afọ iri na anọ nwere ohere ịghọta na oge ya abịabeghị na e nyekwara ya ọrụ. Nke a bụ ihe nwatakịrị nwanyị ahụ kpughere: "Ọ gwara m na ọ hụrụ m n'anya, ma na ọ dịla njikere ịnabata m n'ụlọ ya, ma ọ ruteghị ya, m wee teta." O wee kesaa mmadụ niile, sị: “Jizọs nwere ozi ọ bụla. Na Ọ bụ eziokwu, Ọ dị ndụ ma dị ndụ ”.
Ebe e si nweta ya: notiziecristiane.com
← Na post gara aga Gara aga post:Idoro onwe gị ala na Madonna maka ndị nwere obere oge ikpee
Ọzọ Post → Post ozo:Novena nye Nwaanyị nke amara amara